हरेक घरको भान्सामा पाइने यी खानेकुरा, जसले बढाउँछ रोगसँग लड्ने क्षमता !! | सुदुरपश्चिम खबर
इम्युनिटी सिस्टम एवं रोग प्रतिरोधात्मक तन्त्रले हाम्रो श’रीरमा सम्भावित रोगको सं’क्रमणबाट रक्षा गर्छ। हरेक जीवित मानिसको श’रीरमा रो’ग प्रति’रोधात्मक तन्त्र नामको यस्तो सं’यन्त्र हुन्छ, जसले ब्या’क्टेरिया, भाइरस आदिबाट श’रीरलाई टाढा राख्छ। अतः रो’ग प्रति’रोधात्मक क्ष’मता बढाउनका लागि खानपान र दिनचर्या निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो त हाम्रो भान्सामा यस्ता खानेकुरा उपलब्ध हुन्छन्, जसले रो’गसँग ल’ड्ने क्षमता बढाउँछ।
प्याज प्याजमा फ्लेवेनाइड्स नामको तत्व सामेल हुन्छ, जसले हाम्रो शरी’रको धमनीमा विशा’क्त तत्व जम्मा हुन दिँदैन । यसले सुन्निने स’मस्या आउन दिँदैन । त्यसैले प्याजको सेवन श’रीरको लागि लाभ’दायक हुन्छ । यसलाई तरकारीमा मिसाएर वा सलादको रुपमा काँचो खान सकिन्छ ।लसुन लसुनले हाम्रो श’रीरमा ब्ल’ड प्रे’सर कम गर्छ । यसमा हुने ए’न्टिक्यान्सर र ए’न्टिअक्सिडेन्टले श’रीरको विषाक्त तत्व बाहिर निकाल्छ । नियमित रुपमा हरेक बिहान उठ्नासाथ खाली पे’टमा लसुन से’वन गर्नुपर्छ ।
यसले श्वा’स नली’को समेत सफाइ गर्छ ।अलसी अ’लसीमा ओमेगा ३ फ्या’टी ए’सिड हुन्छ, जसले हाम्रो शरी’रमा रो’ग प्रति’रोधात्मक क्ष’मता बढाउँछ । साथै, पे’टलाई पनि सफा राख्छ । हरेक बिहान आधा चम्चा अलसीको बि’उ से’वन गर्दा क’ब्जियतको स’मस्या रहँदैन ।कागती कागतीले एक डि’टाक्सीफायरको रुपमा काम गर्छ ।
नियमितरुपमा हरेक बिहान कागती पानी से’वन गर्नुपर्छ। जसले श’रीरमा रहेको वि’षाक्त पदा’र्थ बाहिर निकाल्छ । बन्दा सब्जी वा सलादको रुपमा बन्दाको से’वन गर्न सकिन्छ । यो स्वादिलो त हुन्छ नै स्वा’स्थ्यका लागि ला’भदायक पनि हुन्छ। बन्दाले हाम्रो श’रीरको रोग प्रति’रोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
यसले पाचन न’लीलाई पनि सफा बनाउँछ । च्याउ च्याउमा एन्टि’अक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा हुन्छ । यसले हाम्रो श’रीरको रो’ग प्रति’रोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । च्याउमा भिटामिन डि, बि–१, बि–३, बि–५, बि–६ आदि पाइन्छ । यसले ह’ड्डीलाई पनि बलियो बनाउँछ । तौल घ’टाउन र सु’गर लेबल सही राख्नका लागि च्याउ उपयोगी हुन्छ।
बेसार बेसार एन्टि’अक्सिडेन्टको राम्रो श्रोत हो । यसले र’गत शुद्ध बनाउने काम गर्छ । साथै, शरी’रको रुप र रं’गमा सु’धार ल्याउन पनि बेसार उपयोगी हुन्छ । यसले क्या’न्सरदेखि अ’ल्जाइमरसम्मका रो’गबाट मुक्त गराउने क्ष’मता राख्छ । बेसारमा रहेको कर’क्युमिन नामक तत्वले र’गतमा सुगरको स्तर नियन्त्रण गर्छ। व्या’याम र स्वस्थ्य दिनचर्या सन्तुलित खानपानसँगै नियमित व्यायाम, स्व’स्थ्य दिनचर्या पनि आवश्यक हुन्छ, रो’ग प्रति’रोधात्मक क्षमता विकास गर्नका लागि ।पानी – पर्याप्त मात्रामा पानीको सेवन गर्नुपर्छ ।
यसले गर्दा मृ’गौलाको कार्य प्रणाली चुस्त दुरुस्त रहन्छ । श’रीरको वि’षाक्त प’दार्थ बाहिर जान्छ । यसले प्रतिरो’धात्मक क्षमता बढ्छ ।निद्रा– पर्याप्त निद्रा लिनुपर्छ । यदि राम्ररी निन्द्रा पुगेन भने पनि श’रीरको रो’ग सँग ल’ड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । श’रीर र म’स्तिष्कले सहि ढंगले काम गर्नका लागि ६ देखि ८ घण्टाको निद्रा आवश्यक छ ।सरसफाइ– रो’ग प्रति’रोधात्मक क्ष’मता बढाउनका लागि वातावरण स्वच्छ हुन आवश्यक छ । किनभने फोहोर
मै’लाबाट रो’गको सं’क्रमण फैलने भय रहन्छ । त्यसो त वातावरण मात्र होइन आफ्नो लता कपडा, भाँडाकुँडा, ओड्ने ओछ्याउने, पहिरन सबै कुरा सफा हुनुपर्छ ।
भगवान शिवको दर्शन गरि हेर्नुहोस आजको राशिफल - शुभ दिनको कमना !!